मुस्कुराउँदै मेरो नजिक आइन् भागीरथी, मैले ल’डाए – Sidha Kura
बच्चा जन्माउने लतः २३ वर्षको उमेरमा ११ बच्चा जन्माइसकेकी युवती सय बच्चा चाहन्छिन्
फेरि झनै कडा गरि कति लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा ? अब घरबाहिर पनि निस्किन नपाइने
सर्पको बिगबिगीका कारण स्थानीयहरु समस्यामा, आधा साउनमै सर्पदंशका घटना डरलाग्नेगरी बढे
आज १८ साउन २०७८, सोमवार : आजको राशिफल
सबैभन्दा ठूलो मुख बनाएर विश्व कीर्तिमान (भिडियो सहित)
७ बर्षको सानो उमेरमा ‘बजरंगी भाईजन’बाटको अभिनयले चर्चित बनेकी मुन्नी अहिले यस्ती देखिन्छिन्, (हर्नुहोस तस्बिर सहित )
मेलम्चीमा बजार खाली गराइयो, चनौटेको रातो पुल पनि बगायो, रेडियो मेलम्चीको भवन पनि बगायो
राज कुन्द्रा घटनामा ठूलो खुलासा, प्रहरीले राजलाई फसाउन गहनालाई कसरी प्रयोग गर्यो ?
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मुस्कुराउँदै मेरो नजिक आइन् भागीरथी, मैले ल’डाए
मुस्कुराउँदै मेरो नजिक आइन् भागीरथी, मैले ल’डाए
2,5835minutes read
अभियुक्तप्रति चार आशंका, पहिलो : दिनेश टिफिन टाइममा भलिबल खेलेर पाँचौं घण्टी लाग्नेबित्तिकै सनातन धर्म माविबाट घर आए। तर, उनले प्रहरी र आफन्तलाई आफू एक पिरियड छाडेर मात्रै घर आएको बताए। प्रहरी भन्छ, ‘उनले घटनापछि घर पुगेको समय लगभग पूरै पढेर आएको भन्दा झन्डै–झन्डै एक पिरियड अगाडि हुन्छ। समय मिलाउन झुटो बोलेको।’
दोस्रो : १:४५ मा टिफिन टाइम सकिन्छ। १:५० मा दिनेश, भागरथी, भानदेव र लीलाधर खोचलेकमा भेटिन्छन्। भागरथी घर हिँडिहाल्छिन्। लीलाधर र भानदेव कपाल का ट्न सैलुनमा छिर्छन्। तर, प्रहरी भन्छ, ‘दिनेश कता गए ? बताउँदैन।’
तेस्रो : खोचलेकबाट झन्डै १:५५ तिर दिनेश भागरथीको पछि–पछि घर जान्छन्। त्यहाँबाट घटनास्थलको दूरी पैदल ४० मिनेट हाराहारी हो। उनले २:३५ बजेसम्म लवलेक बन पार गरिसक्नुपर्छ। तर, उनलाई ३:२५ बजे पासिमबाटाका मानिस घर जाँदै गरेको देख्छन्। प्रहरी भन्छ, ‘त्यो बीचको ५० मिनेटको समयमा दिनेश कहाँ गए ?’
चौथो : दिनेश भागरथीको शव फेला परेको दिन घटनास्थलमा आएर केही बेरपछि घर फर्के। उनी तालिमप्राप्त कुकुर आएको दिन घटनास्थल नै गएनन्। प्रहरी भन्छ, ‘उनलाई कुकुरले समात्ने डर लाग्यो।’
यस्तै कारणले उनीमाथि निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दिनेशले आफूलाई खोचलेकमा देख्ने मानिससँग झ गडा गरेकाले पनि उनी झन् शंकाको घेरामा परेको प्रहरीले बतायो।
(अनुसन्धान अधिकृतसँगको कुराकानीमा आधारित)
अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको समाचार अनुसार दिनेश माघ २१ गते टिफिन टाइममा भलिबल खेलेर घण्टी लाग्नेबित्तिकै भागेर घर आए। बिनाड्रेस गएको भनी शिक्षकले हप्काएका चडेपानीकै भानदेव भट्ट र लीलाधर भट्ट पनि टिफिनको समयमा स्कुलमै भलिबल खेलेर घर आए।
भागरथी व्यवस्थापन विषय पढ्थिन्। उनी पढ्ने सनातन धर्म माविले व्यवस्थापन विषयका विद्यार्थीलाई टिफिनमा पनि पढाएर पाँचौं घण्टीमा बिदा गर्दै आएको थियो। त्यसकारण पनि टिफिनमा भलिबल खेलेर घर फर्किरहेका दिनेश, भागरथी र अरू दुई जनाको नजिकै खोचलेक बजारमा भेट भयो।
भागरथीले भानदेवलाई कति बेला जाने भनेर सोधिन्। भानदेवले कपाल का टेर जाने भनेपछि भागरथी घरतिर हिँडिन्। लीलाधर र भानदेव सैलुनमा छिरे भने दिनेश भागरथी हिँडेको ४–५ मिनेटपछि घरतिर हिँडे। उनले भागरथीलाई खोचलेकबाट १५ मिनेट पैदल दूरीमा रहेको सिल्ल भन्ने गाउँमा ओभरट्याक गरे।
दिनेश भागरथीलाई छाडेर सिधै अगाडि जाँदै गरे। उनी घटनास्थल भएको ठाउँमा भागरथीभन्दा केही मिनेटअघि पुगेका थिए। भागरथी मोबाइलमा एयरफोन लगाएर गीत सुन्दै घरतिर आइरहेकी थिइन्। घटनास्थलमा दुवै जनाको भेट भयो। मुस्कुराउँदै आफूनजिक आएकी भागरथीलाई दिनेशले ध क्का लगाएर खो ल्सोमा फा ले।
त्यो खोल्सो लवलेक जंगलको ५० प्रतिशत वन क्षेत्र क टिसकेपछि छ। खोल्सोभन्दा चार–पाँच सय मिटरमा पासिमबाटा भन्ने गाउँ छ। भागरथी खोल्सोमा ध’केलि’एपछि घाइते भइन्। घाइते अवस्थामा फेरि दिनेशले अलि तल फाले। त्यति बेला भागरथी प्र’तिकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्।
तेरा बाले मेरो फुपूको कर णी गर्ने ? भनेर उनले भागरथीको घाँ टी थि’चे र मा’रि’दि’ए। त्यसपछि भागरथीको तल्लो वस्त्र मात्रै खोले उनले। भागरथीको फोन खोल्सोको बीचमै खसेको थियो। दिनेश उनको फोन लैजान फेरि शव भेटिएको स्थानभन्दा अलि माथि आए। उनले फोनको ब्याट्री झिके र केही पर गएर फा’लिदिए। जुन स्थान प्रहरीको तालिमप्राप्त कुकुरले पछ्याएको थियो।
अभियुक्तले परिवारसँग पनि भने, ‘भागरथी दिदीको ह’ ‘त्या मैले गरेको हुँ, ठूलो गल्ती भयो’
भागरथी भट्टको प्रकरणमा पक्राउ परेका किशोरले परिवारसँग पनि आफूले नै ज्या न लि एको कुरा बताएका छन्। प्रहरीको शब्दमा अन्दाजी १८ वर्षीय अभियुक्त दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ कै दिनेश भट्टले भागरथीको ज्या न लि एको कुरा साँचो भएको बताएका हुन्।
दिनेशले ह’ ‘त्या गरेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै शव बुझ्न अ’स्वीकार गरेपछि प्रहरीले परिवारका सदस्यलाई उनीसँग एक्लाएक्लै भेटाएर कुराकानी गर्न लगाएको हो। सोही क्रममा उनले भागरथीको गरेको बताएको अभियुक्त र मृतकका काका समेत रहेका शिवराज भट्टले बताए।
दिनेशखबरका अनुसार “प्रहरीले अभियुक्तको साबिती बयानबाहेक अन्य विश्वसनीय प्रमाण पेश नगरेका कारण मेरो मनमा पनि विभिन्न खालका शंका थिए, ” शिवराजले भने, त्यसपछि मैले उसलाई एकान्तमा एक्लै भेटेर तिमीलाई कुनै द’बा’ब र प्रभाव देखाइएको छ कि? यदी त्यस्तो छ भने हामी तिम्रो न्यायको लागि ल’ड्छौँ भने। तर जवाफमा उसले ‘आफूले नै भागरथी दिदीको ह’ ‘त्या गरेका हुँ भन्यो।’
शिवराजका भनाईमा दिनेशले नाताले दिदी पर्ने भागरथीको ज्या न लि एर ठुलो गल्ती गरेको समेत बताएका छन्। तर प्रहरीलाई दिएको बयान जस्तै उनले कर णी पछि ज्या न लिएको कुरा भने परिवारसँग पनि अस्वीकार गरेका छन्।
“‘म सुरुमा कर णी ग र्ने उद्देश्यले नै भागरथी दिदीको पिछा गरेर त्यो ठाउँमा कुरेर बसेको हुँ,’”अभियुक्तले भनेको कुरा उल्लेख गर्दै शिवराजले भने, “‘जब उसलाई मैले बाटोबाट ल’डाए एकपटक उठी तर म सँग एक शब्द सम्म बोल्न सकिन। त्यसपछि खै के–के भयो थाहा नै भएन। मेरो मनमा घरपरिवारले थाहा पाउने भए भन्ने सोच आयो। हा’ तले घाँ ‘टी च्या पेर मा’ रि दिए। कर णी गर्न पाइन्ट खो ल्दा ब्ल’ड देखियो त्यसैले गरिन।’”
अभियुक्तले प्रहरीलाई दिएकै साबिती बयानसँग मिल्ने कुरा परिवारका सदस्यसँग भनेपनि अब त्यसलाई पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाण समेत प्रहरीले आफूहरुलाई देखाउँपर्ने माग उनीहरुको छ।
आरोपी दिनेश भर्खरै कक्षा ११ मा भर्ना भएका थिए
आरोपी दिनेश भट्टले कक्षा १० सम्मको पढाई चडेपानी गाउँकै भूमिराज माविबाट गरेका थिए । कोरोनाका कारण लामो सयम विद्यालय बन्द हुँदा दिनेशले लामो समय घरमै बसेर बिताएका थिए । विद्यालय खुलेपछि घरबाट करिब एक घण्टाको दूरीमा पर्ने सनातन धर्म मावि खोचलेकमा दिनेश भट्ट भर्खरै कक्षा ११ मा भर्ना भएको विद्यालयका प्राचार्य दलवेद नाथले बताए ।
प्राचार्य नालले भने, “ दिनेश विद्यालय आउँन थालेको १५÷२० दिन मात्र भएको थियो । अहिले पनि कक्षा ११ को भर्ना चलिरहेको छ । उसले भर्नाका लागि चाहिने सबै कागजपत्र बुझाएको पनि छैन । छोटो समयमा दिनेशलाई चिन्ने मौका पनि मिलेन ।”
दिनेशको विषयमा भूमिराज मावि चडेपानीक प्रधानाध्यापक प्रजापति भट्टले कक्षा १० सम्म पढ्दा मध्यम खालको विद्यार्थी भएको बताए । प्रधानाध्यापक भट्टले भने, “ गाउँको भूमिराज माविमा कक्षा १० सम्मको मात्र पढाई हुन्छ । दिनेशले गत वर्ष २०७६ सालमा एसईई दिएको हो । विद्यालयमा रहँदा अध्ययन र स्वभावका दृष्टिले मध्यय खालको विद्यार्थी हो । विद्यालयमा रहँदा अहिलेसम्म अप्रिय घटना गरेको तथ्याङ्क छैन ।” भागरथी भट्टको प्रकरणमा प्रहरीले भागरथीकै गाउँ दोगडाकेदार गाउँपालिका–७, चडेपानीको लमकट्टे बस्ने किशोर दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै सुदूरपश्चि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तरमराज सुवेदीले घटनासँग तमाम सबुत र प्रमाणका आधारमा भागरथी भट्टको आरोपमा अन्दाजी १८ वर्षीय दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरिएको बताए ।
डीआईजी सुवेदीले भने, “ तमाम तथ्य–प्रमाण, युवाको फोनको लोकेशन र बयानका आधारामा पक्राउ गरेका हौं । जिल्ला अदालतमा म्याद थपरेर सरकारी वकिलको रोहबरमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाईने छ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी सुवेदीले घटनास्थलको प्रकृति बारे जानकारी दिनुहुँदै भागरथीको टा उँको चो ‘ट रहेको, घाँ’ ‘टीमा द’ ‘बाए जस्तो डा’ म रहेको, खुट्टाको औलामा घाउँ रहेको र यौ’ ‘नीबाट र ग ‘त जस्तो प ‘दा’र्थ बगेको अवस्थामा शव भेटिएको बताए।
अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धान बारे जानकारी दिनहुँदै डीआईजी सुवेदीले आरोपित दिनेश भट्ट घटनाको दिन अन्तिम विषय नपढी सनातन धर्म माविबाट ०१ः ४५ बजे साथीहरुसँग स्थानीय खोचलेक बजारमा आएको र अन्य साथीलाई बजारमै छाडेर एक्लै चडेपानी गाउँतर्फ गएको खुलेको बताए ।
घटनामा अरुको पनि संलग्नता रहे नरहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले अहिले दिनेश भट्टको मात्र संलग्नता देखिएको बताए । विस्तृत अनुसन्धानबाट थप कुरा खुल्ने उनले बताए । अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरि थप तथ्य खुलेमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँने डीआईजी सुवेदीले बताए ।
घनाको अनुसन्धानमा पारिवारिक रिसईवीको विषयमा पछि थप कुरा खुल्ने सुवेदीले बताए । प्रहरीले लामो अनुसन्धान पश्चात प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरेकोले अनावश्यक श ङ्का नगर्न पनि डीआईजी सुवेदीले आग्रह गरेका छन् ।
भागरथीको घटना निर्मलाको जस्तो नहोस् भनेर आफै अनुसन्धनमा खटिएर १३ दिनपछि आरोपित सार्वजनिक गरिएको डीआईजी सुवेदीले बताए ।
कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ११० मा झर्याे, मारमा किसान !
कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टरनै परे चकित
एउटा सानो गल्तीले ७ वर्षीया अदीतिले संसारबाट सदाको लागि बिदा भइन् !
यि नै हुन् दलित महिला बाट पहिलो पटक प्रहरी निरीक्षक मा नाम निकाल्न सफल सरिता विश्वकर्मा !
निर्मला पन्तको ह त्या रा लाई केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने